Hub Al-Shabaab uga yimid Yemen soo gaarey Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Hub Al-Shabaab uga yimid Yemen soo gaarey Soomaaliya
Yemen ayaa ah isha ugu wayn ay Al-Shabaab ka hesho inta badan hubka ay ku dagaalanto, waxaana inuu dalka soo galo u fududeeya Ganacsato doomaha ku shaqeysta oo reer Puntland ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kooxda Al-Shabaab, ee gacan-saarka la leh Al-Qaacidda ayaa Hub aad u badan uga soo degay xeebaha gobolka Sanaag, oo katirsan Maamulka Puntland, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Hubka oo isagu jira qoryaha fudud iyo kuwa culus oo ay la socdaan rasaas aad u badan ayaa laga soo dejiyay degaan lagu magacaabo Durduri, oo hoostaga degmada Laasqoray, waxaana lagu keenay doon ka timid Yemen.
Gaadiid u kireysan Al-Shabaab ayaa hubka looga soo qaadey Durduri, waxaana uu kusii jeedaa Buuralayda Galgala, oo katirsan gobolka Bari halkaasoo Kooxda Al-Shabaab mudo dheer ku lahayd saldhigyo ay kasoo duusho.
Wararka KON helayso ayaa sheegaya in hubkan ay soo galiyeen dalka ganacsato reer Puntland ah, oo heshiis kula galay Al-Shabaab inay hubka uga soo qaadaan Yemen, islamarkaana ay kasoo dejiyaan xeebaha Sanaag, iyagoo adeegsanaya doonyo kuwa kalluumeysi.
Waxaa lagu soo waramayaa in ay jiraan Mas'uuliyiin katirsan Puntland oo gacan-saar hoose la leh Al-Shabaab, oo kala shaqeeya Kooxda inay u fududeeyaan waxyaabaha dibadda uga yimaada sida hubka iyo dagaalyahanada.
Warbixin dhawaan ay daabacday Global Initiative ayaa lagu sheegay in Shirkado xawaaladeed oo Iftin Express iyo Amal Bank ay kamid yihiin, kuwaasoo laga leeyahay Puntland ay ku lug leeyihiin ganacsiga hubka sharci darrada ee lasoo geliyo dalka Soomaaliya,
Al-Shabaab oo guul-darrooyin isadaba joog ah kasoo gaarey dagaalka uga furan Koonfurta ayaa u jihaysatay Puntland, oo aad ugu awood badan tahay gobolka Bari, iyadoo ay canshuur ka qaado ganacsiga Boosaaso.